Messi oo xidigii hore Juventus ee Dani Osvaldo si weyn u farxad galiyay, kadib markii uu arintan kula dabaal dagay – Gool FM
Messi oo xidigii hore Juventus ee Dani Osvaldo si weyn u farxad galiyay, kadib markii uu arintan kula dabaal dagay
(Argantina) 30 Maajo 2018. Ciyaaryahankii hore ee kubada cagta Dani Osvaldo ayaa kala soo muuqday baraha bulshada tan iyo markii uu ciyaaraha ka fariistay sanadka 2016, isagoo kadib go’aansaday in uu nolshiisa uu weeciyo dhanka fanka.
Dani Osvaldo oo asal ahaan kasoo jeeda dalka talyaaniga balse wuxuu heysta dhalasho dalka Argantina ayaa soo saaray album cusub. Sidaas darteed wuxuu u adeegsaday xulka Argantina kadib markii uu la kulmay ciyaartoyda oo ay saaxiibo qaarkood kusoo noqdeen kooxaha yurub.
Dani Osvaldo ayaa wuxuu soo dhigay bartiisa Instagram-ka sawirka isaga iyo Messi, inta uu ku gudi jiray booqashada xulka qaranka Argantina, wuxuuna hadiyeeyay laba qeyb ka mid ah albumkiisa cusub
Bishii October 2016 ilaa iyo haatan ayuu weeraryahanada Boca Juniors, Roma, Southampton, Juventus wuxuu kusoo noolaaa arimaha fanka kadib bilooyin marka uu ka fariistay kubada cagta.
Eduardo Inda oo ka warbixiyay in Real Madrid ay kaga carootay Neymar Jr kadib markii uu sameeyay Arintan
Manchester United oo shaacisay qiimaha ay ku dooneyso inay kula soo wareegto Gareth Bale